Mabaadi'da Operating - Jinghui Environmental Technology Co., Ltd.
Commercial Air meeldhexaadka ah
Portable Air meeldhexaadka ah
Infrared iftiimeen kululeeyaha
Base Station Qaboojinta
Nature ee hab ugu hufan qaboojinta waa iyada oo uumi oo biyo ah. qaboojinta Evaporative ka shaqeeya on mabda'a ah nuugista kulaylka by uumi qoyaan. Waxa kale oo dhacaya on maqaarka aadanaha, dhididka jidhka oo ay u qaboojiso heerkulka. Tani waxa la mid ah sida aad dareensan tahay qabow marka dabaysha iyo badda ah buunafuufid xusuus.
JH meeldhexaadka ah evaporative saarta qaboojinta wax ku ool ah oo ay isku ah uumi-geedi-biyaha dabiiciga ah nidaam sahlan, la isku halayn karo hawada-dhaqaaqin. hawada dibada Fresh la sifeeyo iyada oo warbaahinta evaporative cokan, la qaboojiyey by uumi, iyo siidaayey by kabuufi ah.
JH coolers evaporative waa fiican meelaha waaweyn furan. meelaha Cool waaweyn sida bakhaarada, garoomada at dhacdooyinka isboorti, koriyo, meelaha dukaan, goobaha shirka. nidaamka qaboojinta Evaporative bixiyaan kale qiime jaban ah in qaboojiyaha. Easy si ay u qotomiyey on derbiga, daaqadda iyo saqafka, ma aha oo kaliya bixiyaan qaboojinta, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan hawo wanaagsan. Waxay isticmaalaan simoly il biyo ah gudaha ama dibadda si ay u siiyaan qaboojinta.
Cinwaanka: Wushan Road NO.3, Gaishan Town, Degmada Cangshan, Fuzhou City, Gobolka Fujian, Shiinaha